Amụma 2009: Searchchọ na Mobile bụ Ọdịnihu | Martech Zone
Amụma 2009: Searchchọ na Mobile bụ Ọdịnihu
Satọdee, Nọvemba 8, 2008 Mọnde, Jenụwarị 14, 2013 Douglas Karr
Ihe m na-ewepu na ngosi a bụ na iji ekwentị na-aga n'ihu na-enweta nnabata, na-enye ụzọ ọhụụ maka ụlọ ọrụ iji ruo ndị ahịa ha. Ọ bụ ya mere m ji nwee nchekwube maka ijikọta ahịa mkpanaka na saịtị gị na mkpọsa ya na ụlọ ọrụ ndị dị ka Connective Mobile.
Tụkwasị na nke a, slides na-enye ọtụtụ ihe akaebe na uto nke Search Marketing (organic na pay-per-click) ga-aga n'ihu na-agbawa na uto n'ihi nsonaazụ atụ na nloghachi dị egwu na ntinye ego. Ọ bụ isi ihe mere m ji kwaga n'ọnọdụ m na Compendium Blogware, a ụlọ ọrụ ịde blọgụ nke na-enye ma ngwa ma nkuzi ọ dị mkpa maka azụmaahịa iji nweta ebe a na-achọ ihe.
N'ebe a na-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị, enwere m ndị enyi abụọ - Pat East na Ahịa Hanapin na Chris Bross na oke - ndị na-eto ngwa ngwa ma na-emezu atụmatụ na njikọta PPC mkpọsa nke na-aga n’ihu inye ezigbo nkwụghachi na ntinye ego maka ndị ahịa ha.
Tags: akwụ ụgwọ ọchụchọakwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ọchụchọkwụọ ụgwọ kwa Pịappcppc gị n'ụlọnga
Na njedebe nke Nnukwu Ọchịchị M
Kekọrịta Ndahie M (na Ọganiihu M?)